म बाँचेर यी कोपिलालाई फूलाउन चाहान्छु, सम्भव हुनेले सहयोग नहुँदा एक सेयर गरिदिनुस् है – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: १६:४२:४४
May 19, 2021 10
काठमाडौ । मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो धर्म नै मानव सेवा हो । कुनै मानिसको सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्छ । एक पटक सोच्नुहोस् त सन्तान नै सृष्टिको खेल कसैले चाहेर हुन्न ।
जन्माएपछि हुर्काउन कति लाग्छ । तर तपाईहरुको सानो सहयोगले जन्मिएर हुर्किएको लाई पुर्न जीवन दिए समान हुनेछ । आर्थिक सहयोग गर्न प्राविधिक रुपमा सम्भवन हुनेले सहयोग गरिदिनुहोस् ।
कसैले चाहेरपनि प्राविधिक रुपले सहयोग गर्नसक्नुहुन्छ । टाढा हुनुहुन्छ । विदेशमा मोबाईल एपहरु भएपनि पठाउन मिल्दैन । कसैसँग मोबाईल एपपनि हुन्न त्यस्ता व्यक्तिले यो सन्देश जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् । म बाँच्न चाहान्छु ।
मानिसको शत्रु रोग समान अरु को हुन सक्छ र ? रोगले सानू ठुलो बुढो तन्नेरी, धनी, गरिब कहाँ भन्छन् र ? भर्खरै २१ बर्षको कलिलो उमेरमा नै मेरो पाठेघरमा संक्रमण भएर पित्तथैली र मृगौला सम्ममा असर पार्दै गएको हुनाले बिगत १ वर्षदेखि बिरामी छु ।
म सन्दु वाइबा अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहेकी छु । अहिले मसँग औषधि किन्ने पनि पैसा नभएकाले म सन्दु वाइवा लाई बचाऊनका लागि हजुरहरुको सहयोगको ठुलो खाँचो छ। म पुर्न जन्मको भीख माग्दछु । तपाई हरुको सानो सहयोगमा छ मेरो जीवन ।
विगत दुई साता देखी पाठेघर संक्रमण भई पित्तथैली र मृगौलामा समेत संक्रमण फैलिएर टिचिङ्ग अस्पतालमा भर्ना भई उपचरत म मकवानपुर जिल्ला, इन्द्रसारोबार गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी सुरेंद्र वाईबाकी २१ वर्षीय पत्नि सन्दु वाईबा हुँ ।
आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ। गाउँबाट चन्द संकलन गरी उपचार गर्न काठमाण्डौ आएकी थिए । अत्यावश्यक औषधी किन्न समेत पैंसा नभएकाले पति सुरेन्द्र वाईबाको खाता मार्फत सहयोगको अपिल गरिरहेकी छु ।
तपाईंको सानो सहयोगले बिरामी म सन्दुले नयाँ जीवन पाउन सक्छ साथै उनकी १८ महिनाकी छोरी र ६ बर्षे छोराको भविष्यको निम्ति भएनी सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो मद्दत गरिदिनुहोला। सबैले सक्दो सहयोग र यो पोस्ट लाई सेयर गरी उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइदिनुहोला भनी विनम्र अनुरोध गर्दछु।म बाँचेर यी फूलका कोपिला जस्ता बच्चालाई फूलाउन चाहान्छु, सम्भव हुनेले सहयोग नहुँदा एक सेयर गरिदिनुस् है ।
मलाई सहयोग को लागि
बैंक खाता नम्बर : 05005120250467 (Nepal Investment Bank) (Branch – Naxal, kathmandu)
यो पोस्ट शेयर गरी सहयोगी मन सम्म पुराई दिनुहोला ।
Last Updated on: May 19th, 2021 at 4:42 pm
२६३१ पटक हेरिएको